Electric skuuta, Akwara ịhịa aka n'ahụ Gun, Fitness Bike - Jinbang
Freestyle skuuta (makwaara dị ka scootering, skuta, ma ọ bụ nanị ịnya) bụ oké egwuregwu na-agụnye iji stunt scooters na-eme freestyle aghụghọ na yiri igwe motocross (BMX) na skateboarding. Kemgbe e bidoro egwuregwu ahụ na 1999, ndị na-eme egwuregwu na-atụgharị anya. Dịka ọmụmaatụ, ụlọ ọrụ scooter Razor gbanwere site na ịmepụta ụdị Razor A nke na -emepụta skuta na-arụ ọrụ ma na-etinye akụkụ sitere na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Ka egwuregwu ahụ na-eto, e mepụtara azụmaahịa na sistemụ iji kwado uto nke obodo na-agụ akwụkwọ. Otu ihe atụ nke usoro nkwado oge mbụ bụ nzukọ ndị Scooter Resource (SR), nke nyeere aka mee ka obodo ahụ nwee njikọ site na ijikọta ndị nwere mmasị na skuuta na 2006. Ka ndị na-agagharị agagharị na-ewu ewu, a na-achọsi ike maka akụkụ azụmaahịa siri ike na maka ụlọ ahịa skuta. buru akụkụ ndị ahụ.
Ndị na-agba ịnyịnya eletriki eletrik enweela ndị na-ewu ewu na gas na-ewu ewu kemgbe 2000. Ha na-enwekarị obere wiil abụọ siri ike, na chassis foldable, na-abụkarị aluminom. Fọdụ ndị na-agba ụkwụ nwere ụkwụ atọ ma ọ bụ anọ, ma ọ bụ jiri plastik mee ihe, ma ọ bụ buru ibu, ma ọ bụ adaghị. High arụmọrụ aghụghọ skuta mere maka ndị okenye nwere a ukwuu ibu n'ihu wheel. Egwuregwu eletriki eletriki dị iche na skuuta ndị na-agagharị agagharị n'ihi na ha na-ekwekwa ka mmadụ nwee nkwanye ugwu, na enweghị enyo. Ogologo dịgasị iche site na 5 ruo 50 km (3 ruo 31 mi), na ọsọ ọsọ kachasị gburugburu 30 km / h (19 mph).
Massage egbe JB8009
Massage egbe JB8008
Ihe ọ bụla anyị raara nye na JOYBOLD B about maka agagharị. Anyị bụ ndị ọhụụ na ndị ọsụ ụzọ dị ka akara nke igwe eletriki eletrik na china, anyị na-etinye nchegbu karị na ụdị okike nke ibi ndụ, na-ezute ọ bụghị naanị mkpa dị na ndụ gị, mana ozi maka ụwa anyị mara mma ịchụso nchekwa gburugburu ebe obibi.